Ogologo Ahịa Uba
Home > Ngwaahịa > Ogologo Ahịa Uba (Total 7 Ngwaahịa maka Ogologo Ahịa Uba)
Ogologo Ahịa Uba - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
Anyị bụ ndị ọkachamara Ogologo Ahịa Uba manufacturers & suppliers / factory from China. Ebube Ogologo Ahịa Uba na akwa dị elu dịka obere ọnụahịa / ọnụ ala, otu n'ime Ogologo Ahịa Uba na-eduzi ụdị aha si China, ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD .
Kasị ewu ewu na-acha ọkụ ọkụ
Tag: Ogologo Ahịa Uba , Igwe ọkụ na-adịgide adịgide , Egwuregwu n'èzí
Enwe ọkụ ogige Yangneng na-eji oriọna na-arụ ọrụ na CCFL nwere ike nke yiri ọkụ ọkụ na-enwu gbaa 70W. Ogwe ọkụ ahụ bụ 3M elu ma ndụ oriọna karịrị awa 20,000. Ike ọkuku na-eji nchịkwa anyanwụ dịka 35k monocrystalline Silicon, jiri nlezianya chịkwaa...
Ahịa ike izu ike na-eme ka akpa ohi
Tag: Ngwakọta ngwugwu dị iche iche , Azụmahịa Ndị Mmadụ , Akpaaka akpaaka akụrụngwa
Light azụmahịa ndụ ọhụrụ creativity, anyanwụ ike multi-ọtọ mgbochi na-ezu ohi akpa, ndị azụmahịa bag, l eis ure kọmputa azu paaki. Site n'otu ụkpụrụ nke mbara igwe ụgbọelu, ọ dị mma, dị mma, rụọ ọrụ nke ọma na gburugburu ebe obibi. Na ọkụ na ọkụ...
Tag: Nnukwu - Akwa Azụ Azụ , Na-agba ọsọ anyanwụ Backpack akpa , USB Na-ebu Nchaji akpa
Ndabere azụ azụ na-abanye ndụ gị na echiche nke echiche nchedo gburugburu ebe obibi, ikike nchekwa ọkụ na obere carbon, ma dị oké mkpa maka ndị na-anụ ọkụ n'èzí na ndị njem na-agakarị, na-enye gị ohere ịnweta ihu igwe nke oge ọ bụla na ebe ọ...
Ogologo Ahịa Uba akwa si China, Direct Zụta si China na-eduga ndị nrụpụta na ọnụahịa ụlọ ọrụ dị ala. Chọta akwa Ogologo Ahịa Uba ngwaahịa na ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD ma nweta akwa mma Ogologo Ahịa Uba kpọmkwem site na a pụrụ ịtụkwasị obi Chinese Ogologo Ahịa Uba wholesalers & suppliers. Zipu ihe ị chọrọ ịchọrọ & Mee nzaghachi ozugbo.